Al Shabaab oo gaaray Xeebaha Degmada Bandar Bayla Ee Gobolka Bari – STAR FM SOMALIA
Xoogagii Ururka Al Shabaab ee qabsaday Magaalada Garacad, ayaa durbaba isaga tallaabay Gobolada Mudug & Nugaal, waxayna gaareen deegaano hoos-tagga Degmada Bandar Bayala Ee Gobolka Bari.
Dagaal-yahanada Ururka Al Shabaab oo watay doomaha dheereeya, ayaa waxaa lagu arkay Xeebaha Degmada Bandar Bayla, taasoo baqdin ku keentay bulshada ku nool halkaasi.
Gudoomiyaha Degmada Bandar Bayla, Saciid Aadan Cali (Saciid Anteeno), ayaa waxaa uu xaqiijiyay in Shabaabku ay soo gaareen Xeebaha Degmaaasi.
Gudoomiyaha, ayaa tilmaamay inay soo gaarayaan warar sheegaaya inaanay Shabaabku ku hakan doonin halkaasi, isla-markaana ay uga sii tallaabi doonaan deegaanada kale ee Gobolka Bari.
Gudoomiyaha oo u waramay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa Xoogaga Shabaabka ugu yeeray inaanay soo cago dhigan Degmada Bandar Bayla, si ay labada dhinac u kala badbaadaan.
Wuxuu sheegay inuusan Maamulkiisu weerari doonin Shabaabka maraaya badda, balse haddii ay ku soo xad gudbaan Bandar Bayla, aanu isagu masuul ka noqon doonin, wixii meeshaasi ka dhaca.
Xoogaga Al Shabaab ee socdaalka ku maraaya deegaanada Puntland ee Xeebaha ku teedsan, ayaa qal-qal ku beeray bulshada ku dhaqan deegaanadaasi, inkastoo aan illaa iyo hadda la soo sheegin cid ay ku dhibaateeyeen.
Maxkamad ku taallo dalka Belgium-ka ayaa la soo taagay Maxamed Cabdi Xasan (Afweyne)